Wararkii ugu dambeeyey safarka Muuse Biixi ee Mareykanka - BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyey safarka Muuse Biixi ee Mareykanka
Wararkii ugu dambeeyey safarka Muuse Biixi ee Mareykanka
Dhawaan sida uu ka hor sheegay baarlamaanka Somaliland Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland, waxaa la filayaa in uu safar ku tago dalka Maraykanka Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi.
Muddooyinkii u danbeeyey waxaa laga arkayey warbaahinta iyo qaar ka mid ah maxdaxda falanqeeya siyaasadda Maraykanka, baaqyo isasoo tarayey uu ku aaddanaa samaynta xiriir cusub oo dhex mara Somaliland iyo Maraykanka.
“Mabda’a muhiimka ah ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Madaxweyne Joe Biden ee ah iskaashi lala yeesho asxaabta dimuqraadiga ah ee isku fikirka ah ee ay yoolalka wadaagaan Ma jirin baahi ka weyn oo maanta loo qabo istaraatiijiyadan cusub, maadaama khilaafyadu ku sii baahayaan adduunka oo dhan” ayuu qoraalku ku sheegay Muuse Biixi Cabdi.
Waxaana uu sii xoojiyey in xilligan uu Maraykanku geeska uga baahan yahay saaxiib la isku hallayn karo, isaga oo sheegay in Somaliland u qalanto maadaama ay ‘isku afkaar yihiin, hadday tahay dhinayada dimuqraaddiyadda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha’ sida uu qabo Madaxweyne Muuse Biixi.
Si kastaba, Somaliland muddooyinkii u danbeeyey waxaa muuqatay in ay xidhiidho cusub la yeelanayso dalal badan iyada oo madaxdeeda wasaaraddda arrimaha dibaddu ay safarro kala duwan ku kala tageen, waddamo ka mid ah Afrika, Bariga dhexe, Yurub iyo Ameerikaba. Kuwaas oo isbeddel hor leh u ahaa qaabkii ay Somaliland u waajhi jirtey waayaheeda ‘ictiraaf raadinta.